China SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test manufacturers na ndị na-eweta ya | Na-adanye Bio
A na-eji Dual Biosafety System Ngwaọrụ maka SARS-CoV-2 Antigen Test maka nchọpụta qualitative nke akwụkwọ coronavirus (SARS-CoV-2) antigen nucleocapsid (N) antigen na mmadụ Throat / Nasopharyngeal swab samples na vitro. A ga-eji kit ahụ mee ihe dị ka ihe ngosi ma ọ bụ jiri ya na nchọpụta nucleic acid na nyocha nke ndị a na-enyo enyo na COVID-19. Enweghị ike iji ya dịka ntọala naanị maka nchoputa na mwepu nke ndị na-arịa ọrịa pneumonitis nke oria coronavirus bu oria, ọ naghị adabara nyocha nke ndị mmadụ niile. Ngwa ndị ahụ dabara adaba maka ojiji maka nnukwu nyocha na mba na mpaghara ebe akwụkwọ akụkọ coronavirus na-agbasa ngwa ngwa, yana inye nyocha na nkwenye maka ọrịa COVID-19.
Nzọụkwụ®SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test bụ ngwa ngwa immunochromatographic nyocha maka nchọpụta nke antigen COVID-19 na nje SARS-CoV-2 na mmadụ Throat / Nasopharyngeal swab. A na-eji nnwale ahụ mee ihe enyemaka na nchoputa nke COVID-19.
Akwụkwọ ọgụgụ coronaviruses bụ nke usdị. COVID-19 bụ ọrịa na-efe efe nke na-efe efe nke ukwuu. Ndị mmadụ na-adịkarị mfe. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọrịa bu ọrịa a na-ebute site na coronavirus bụ isi ihe na-ebute ọrịa; ndị na-arịa ọrịa a na-akpọ asymptomatic nwekwara ike ịbụ isi iyi na-efe efe. Dabere na nchọpụta epidemiological dị ugbu a, oge mkpuchi bụ 1 ruo ụbọchị 14, ọkachasị 3 ruo ụbọchị 7. Ihe ngosipụta ndị bụ isi gụnyere ahụ ọkụ, ike ọgwụgwụ na ụkwara akọrọ. A na-ahụ mkpọchi imi, imi na-agba, akpịrị akpịrị, myalgia na afọ ọsịsa na ọnọdụ ole na ole.
Nzọụkwụ dị ike®SARS-CoV-2 Antigen Test na-eji ihe nyocha chromatographic mpụta usoro nyocha na usoro cassette. Latex conjugated antibody (Latex-Ab) nke kwekọrọ na SARS-CoV-2 na-eme ka ọ ghara ikpuchi na njedebe nke eriri akpụkpọ anụ nitrocellulose. Ihe mgbochi SARS-CoV-2 bụ nkekọ na Mpaghara Ule (T) na Biotin-BSA bụ njikọ na Mpaghara Nchịkwa (C). Mgbe agbakwunyere ihe nlele ahụ, ọ na-agagharị site na ịgbasa okpu na-emegharị rex conxugate latex. Ọ bụrụ na ọ dị na nlele, SARS-CoV- 2 antigens ga - ejikọ aka na antibodies conjugated na - akpụ ihe. Ihe ndị a ga-aga n'ihu na-akwaga na warara ahụ ruo oge Mpaghara Ule (T) ebe ndị SARS-CoV-2 na-ejide ha na -emepụta akara uhie na-acha uhie uhie. Ọ bụrụ na enweghị antigens SARS-CoV-2 na mpempe akwụkwọ, enweghị eriri uhie na Mpaghara Ule (T). Stptavidin conjugate ga-aga n'ihu na-akwaga naanị ya ruo mgbe e jidere ya na Mpaghara Control (C) site na nchịkọta Biotin-BSA na ahịrị, nke na-egosi ịdị irè nke ule ahụ.
20 Otu nnwale ngwaọrụ
Ngwaọrụ ọ bụla nwere warara nwere conjugates nwere agba na reagents reactive na-agbasakwa na reqions kwekọrọ.
2 Ntughari ihe eji emechi ihe
0.1 M Phosphate bu salfine saline (P8S) na 0,02% sodium azide.
20 Extraịị tubes
Maka ụdị iji nkwadebe.
Ọnọdụ maka ijide vials na ọkpọkọ.
1 Ihe ntinye ntinye
Maka nkuzi ọrụ.
Akụrụngwa chọrọ ma ọ bụghị nyere
Ngụ oge Maka iji oge.
Akpịrị / Nasopharyngeal swab Maka nchịkọta ihe atụ
Ngwa a bụ maka iji VITRO naanị nyocha.
Ngwa a bụ Maka Ọgwụ Ndị Ọgwụ.
Ejila ihe eji eme ihe mgbe ụbọchị mmebi gachara.
Mee ụdị niile dị ka ọrịa nwere ike ibute ọrịa.
Soro usoro nyocha ụlọ nyocha na usoro biosafety maka njikwa na mkpofu nke ihe nwere ike ibute ọrịa. Mgbe usoro nnwale ahụ zuru ezu, tụfuo ihe ahụ mgbe ị gbusịrị ha na 121 ℃ ma ọ dịkarịa ala minit 20. N'aka nke ọzọ, a ga-agwọ ha site na 0.5% Sodium Hypochlorite awa anọ tupu mkpofu.
Ejila ọnụ kpọọ ihe n'ọnụ ma ghara ị smokingụ sịga ma ọ bụ rie nri mgbe ị na-eme nyocha.
Yiri uwe aka n'oge usoro niile.
Nchekwa na kwụsie ike
Enwere ike ịchekwa obere akpa ndị a kara akara na ihe nnwale n'etiti 2 - 30 ℃ maka oge ndụ ahụ dị ka egosiri na obere akpa.
NKỌTECTA NKỌTA NKE MBEC
Nasopharyngeal Swab Sample: Ọ dị mkpa ịnweta ọtụtụ nzuzo dị ka o kwere mee. Ya mere, iji kpokọta Nasopharyngeal Swab sample, jiri nlezianya tinye Swab ahụ na-adịghị ọcha n'ime oghere imi nke na-ewepụta ihe nzuzo kachasị n'okpuru nyocha anya. Debe Swab ahụ n'akụkụ ala septum nke imi ka ị na-eji nwayọọ na-agbanye Swab n'ime azụ nasopharynx. Bugharia Swab ahụ ọtụtụ oge. Akpịrị swab: Mee ka ire ire ma ọ bụ ngaji kpuchie ire ya. Mgbe ị na-agbanye akpịrị, kpachara anya ka ị ghara iji swab metụ ire, akụkụ ma ọ bụ elu ọnụ ọnụ. Ghichaa Swab na azụ akpịrị, na tonsils na ebe ọ bụla ọzọ ebe ọbara ọbara, mbufụt ma ọ bụ ọnya dị. Jiri rayon tipped swabs iji chịkọta ụdị. Ejila alginate calcium, owu tipped ma ọ bụ osisi osisi swabs.
A na-atụ aro ka a na-edozi ụdị swab ozugbo enwere ike ịnakọta. Enwere ike ijide swab n'ime plastik ọ bụla dị ọcha, akọrọ ma ọ bụ aka uwe ruo 72 awa na okpomọkụ ụlọ (15 Celsius C ruo 30 Celsius C), ma ọ bụ friji (2 Celsius ruo 8 Celsius) tupu nhazi.
Weta ule, ihe nlele, nchekwa na / ma ọ bụ njikwa na ọnọdụ ụlọ (15-30 Celsius C) tupu ojiji.
1. Debe tube mmịcha dị ọcha n’ebe edepụtara nke ebe ọrụ ahụ. Tinye 10 tụlee nke mmịpụta Buffer na mmịpụta tube.
2. Tinye ụdị ihe ndozi ahụ n'ime ọkpọkọ. Jiri ike gwakọta ihe ngwọta ahụ site na ịtụgharị swab ahụ n'ụzọ zuru ezu n'akụkụ akụkụ nke ọkpọkọ ahụ ma ọ dịkarịa ala ugboro iri (ma ọ bụ mgbe a na-emikpu ya). A na-enweta nsonaazụ kacha mma mgbe ụdị ahụ jikọtara n'ụzọ siri ike na ngwọta. Kwe ka swab ahụ banye na Ntugharị Mwube otu nkeji tupu Nzọụkwụ ọzọ.
3. Kpachapụ mmiri dị ka o kwere mee site na swab site na-adụpu akụkụ nke tube mmịpụta na-agbanwe agbanwe ka ewepụrụ swab ahụ. Ọ dịkarịa ala, 1/2 nke ihe ngwọta ihe nchebe ga-anọgide na tube maka mwepụ nke okpu zuru ezu iji mee. Tinye okpu n'elu tube amịpụtara. Tụfuo swab ahụ na akpa mkpofu kwesịrị ekwesị.
4. Thekpụrụ ndị amịpụtara nwere ike idowe na ụlọ okpomọkụ nke 60 nkeji na-enweghị emetụta nsonaazụ ule ahụ.
5. Wepu ule site na obere akpa ya akara, ma debe ya na ọkwa dị ọcha, ọkwa. Detuo ngwaọrụ na njirimara ọrịa ma ọ bụ akara njikwa. Iji nweta nsonaazụ kachasị mma, a ga-eme nnwale ahụ n'ime otu elekere.
6. Tinye 3 tụlee (ihe dị ka 100 µL) nke amịpụtara sitere na Extraction Tube na nke ọma na cassette nyocha. Zere ijide ikuku na mmiri n'ime nke ọma (S), ma dobekwa ngwọta ọ bụla na windo nyocha. Ka ule ahụ bidoro ịrụ ọrụ, ị ga - ahụ ụcha gafere akpụkpọ ahụ.
7. Chere ka ihe gbajiri agba (s) gosi. A ga-agụ nsonaazụ ahụ na minit 15.
Akọwapụtaghị nsonaazụ ahụ mgbe nkeji iri abụọ gachara. Wepu tubes eji ule na Cassettes ule n'ime ahihia ahihia.
Nkọwa nke nsonaazụ
IHE Ga-emeli Abụọ nwere agbụ na-apụta n'ime 15minutes. Otu agba nwere agba na-apụta na Mpaghara Njikwa (C) na otu agba nwere agba pụtara na Mpaghara Ule (T). Ihe nlele ahụ dị mma ma dị irè. N'agbanyeghị agbanyeghị mmachi agba nwere na Mpaghara Ule (T), a ga-atụle nsonaazụ nnwale ahụ dị ka nsonaazụ dị mma.
Nsonaazụ na-adịghị mma Otu agba dị iche iche pụtara na Mpaghara Njikwa (C) n’ime nkeji iri na ise. Onweghi agba dị na Mpaghara Ule (T). Ihe nlere ahụ adịghị mma ma dị irè.
NT RRA INWERE Onweghi agba agba pụtara na Mpaghara Njikwa (C) n’ime nkeji iri na ise. Nsonaazụ nnwale ahụ abaghị uru. Tinyegharịa ule ahụ na ngwaọrụ nyocha ọhụụ.
1. Nnwale ahụ bụ maka nchọpụta qualitative nke antiigens SARS-CoV-2 na mmadụ Throat / Nasopharyngeal swab sample na dose adịghị egosi oke nke antigens ahụ.
2. Nnwale ahụ bụ maka iji vitro nyocha naanị.
3. Dika ihe nyocha nile nke nchoputa, nchoputa nyocha nke oma adigh adabere na ntule nke otu ule kama kwesiri ka eme ya mgbe emechara ihe omumu omumu ihe nile, karia ihe ndi SARS-CoV-2 PCR. 4. Nghọta maka nnwale nke RT-PCR na nchoputa nke COVID-19 bụ naanị 30% -80% n'ihi oke ogo ma ọ bụ oge ọrịa na oge mgbapụta, wdg. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Device's sensitivity is theoretically dị ala n'ihi Usoro ya.
AKWKWỌ AKW SYKWỌ
Nanjing Liming Bio-Ngwaahịa Co., Ltd.
Mba. 12 Huayuan Road, Nanjing, Jiangsu, 210042 PR China.
Faksị: (0086) 25 85476387
Nka na ụzụ nkwado: poct_tech@limingbio.com
Mpempe akwụkwọ Antigen Rapid Test (20200713)
COVID-19 Antigen ngwa
Nke gara aga: Akwụkwọ akụkọ Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit
Osote: Dual Biosafety System Ngwaọrụ maka SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test
Coronavirus Maka Covid-19 Ule, Akwụkwọ akụkọ Coronavirus Rapid Test Ket, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Nnwale Nnwale, Coronavirus Antigen Nnwale Ngwa, Igm / Iggrapid Ule Nnwale, H. Pylori Ag Ngwa Ule Na-achọpụta Antigen,